Maamulka Jubbland oo Guul ka sheegtay Dagaalkii Balad Xaawo una jawaabtay Dowlada Fedraalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maamulka Jubbland oo Guul ka sheegtay Dagaalkii Balad Xaawo una jawaabtay Dowlada...
Maamulka Jubbland oo Guul ka sheegtay Dagaalkii Balad Xaawo una jawaabtay Dowlada Fedraalka
Maamulka Jubbaland ayaa guul ka sheegtay dagaalka xoogan ee ka qarxay degmada Balad Xaawo ee u dhaxeeya ciidamo maamulkooda taabacsan iyo ciidamo ka amar qaata dowlada Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay Idaacada BBC-da ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ka qarxay Balad Xaawo, waxa uuna sheegay in dagaalka iyaga lagu soo qaaday ayna iska difaaceen guulna ka gaareen.
Waxa uu sheegay Madaxweyne kuxigeenka in ciidankooda iska caabin kadib usuurto gashay in gudaha u galaan degmada Balad Xaawo ayna hada ciidankooda joogaan saldhiga, Xarunta degmada Balad Xaawo iyo qeybo badan oo kamid ah degmadaasi.
“Saraakiisha hadda i soo wacday waxay ii sheegeen sida janaraal Cabaas oo kale inuu isaga isteeshinka joogo, iyo xarunta degmada, laakiin hadde magaaladu waa magaalo weyn oo daafaheedu ay weli xabbadaha ka dhacayaan,” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland oo ka jawaabay hadal kasoo baxay dowlada Federaalka oo ahaa in Jabhad Kenya soo aas aastay soo weerareen ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaasi , waxa uuna xusay in ciidanooda yihiin ciidan Qaran.
“Waa wax la yaab leh, ciidankaas waa mid 11 sano Gedo difaaceeda ku jiray, dowladihii ku meel gaarka ahaa xilligii Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabo, dowladdii Sheekh Shariif oo aniga oo xildhibaan ah aan wax ka dhisay, xeryo ciidamo ka soo baxay dowlado caalami ah naga kaalmeeyeen, ciidan qaran ah, marka hadde jabhadda ma kuwo indhaha loo soo duubay oo Shabaabka la aruuriyay oo nabad sugidda Xamar laga soo raray baa mise waa ciidankii dalka xoreeyay ee Soomaaliya u dhimanayay? Taas iyaga ayaa la weydiinayaa, Ilaahay ayayna ka furteen kuwa saa u hadlaya.”ayuu yiri Maxamuud Sayid.
Dagaalka saakay aroor hore ka qarxay degmada Balad Xaawo ayaa abaabulkiisa mudo dheer ka socday xadka Balad Xaawo iyo Mandheera, waxaana dagaalkan kusoo aadayaa xili uu Khilaaf xoogan u dhaxeeyo Dowlada Federaalka iyo maamulka Jubbaland.
Previous articleNooca cusub ee Virus-ka Corona ee dabayaaqadii 2020-kii lagu arkay Britain oo si xawli ah ugu sii fidaya dunida.
Next articleWasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha. Somaliya oo ka hadashay tacadiyada ay la kulmaan haweenka,
Shirka Madaxda Soomaalida uga socda Afisooni oo maalintii Labaad wax...
Shirkii Teendhada Afisiyoone ee magaalada Muqdisho uga socday madaxda federaalka, kuwa maamul goboleedyada ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalintii labaad la soo...
Ciidamadii dul daganaa guriga Uganda ka deganyahay musharaxii la tartamay madaxweyne...
Banaanbax Cabasho Ah oo Ay Dhigeen Ehelada Cabduqaadir Baaroyoq oo...
Duuliye horay uga tirsanaa shirkadda diyaaradaha ee US airlines oo ...
Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo laga dejiyay dalka...